Aadam: Barnaamij fariin qarsoodi ah oo qarsoodi ah iyo inbadan | Laga soo bilaabo Linux
Maanta, waxaan sii wadaynaa hal codsi oo dheeri ah fariin deg deg ah wax yar baa laga yaqaanaa barta Linux, oo la yiraahdo "Aadam".
Asal ahaan, "Aadam" Waa a codsi deg deg ah codsi ilo furan oo ku saleysan tiknoolajiyada xannibaadda (xannibaadda), taas oo iyaduna, u adeegta sidii Wallet Crypto (Jeebka 'Crypto') y Nidaamka Isweydaarsiga Cryptocurrency (Isdhaafsiga).
Juggernaut, Sphinx iyo Status: Barnaamijyo xiiso leh oo fariimaha degdega ah lagu wadaago
"Aadam" waa tii afraad codsi deg deg ah codsi faafitaan, taas oo sidoo kale loo adeegsado iskudhafid iyo baahinta tiknoolajiyada xannibaadda, tan iyo, qoraal hore, oo aan kugu martiqaadeyno inaad aqriso kadib markii daabacaaddan la dhammeeyo, waxaan ka qornay Juggernaut, Sphinx iyo Xaaladda. Kuwaas oo aan si kooban u muujinno waxyaabaha soo socda:
"Juggernaut, Sphinx iyo Status kaliya malaha faa iidooyin xiise leh sida codsiyada farriinta, laakiin sidoo kale qaab ahaan ama qaab lacag bixin ah, maadaama ay ku saleysan yihiin tikniyoolajiyadda xannibaadda." Juggernaut, Sphinx iyo Status: Barnaamijyo xiiso leh oo fariimaha degdega ah lagu wadaago.
1 Adamant: Fariin qarsoodi ah oo qarsoodi ah
1.1 Waa maxay Adamant?
1.2 Tilmaamo sifooyin iyo shaqeynaya
1.2.1 Aqoonsi la'aan iyo Asturnaanta
1.2.2 Baahinta baahinta iyo Blockchain
1.2.3 Jeebka Crypto
1.2.4 Nidaamka Isweydaarsiga Cryptocurrency
1.3 Macluumaad dheeri ah
1.3.2 Ku rakibida
1.3.3 Sawirada shaashada
Adamant: Fariin qarsoodi ah oo qarsoodi ah
Waa maxay Adamant?
Marka la soo koobo, adiga degel rasmi ah, wuxuu ku sifeeyaa arjiga sidan soo socota:
"Waa codsi fariin qarsoodi ah oo baahsan".
Si kastaba ha noqotee, sida aan ku sharaxnay bilowga daabacaadda, waa a codsi deg deg ah codsi de il furan ku saleysan tiknoolajiyada xannibaadda (xannibo) taas oo iyaduna, u adeegta sidii Wallet Crypto ah (Jeebka 'Crypto') iyo Nidaamka Isweydaarsiga Cryptocurrency (Sarrifka). Iyo astaamahan iyo kuwa kaleba, waxaan ku sii xejin doonnaa hoosta.
Tilmaamo sifooyin iyo shaqeynaya
Aqoonsi la'aan iyo Asturnaanta
Isticmaalayaasha uma baahna inay isdiiwaangeliyaan ama galaan macluumaad kasta. Ma adeegsado emayl ama lambarro taleefan. Midkoodna xogta aaladda isticmaaleha (sida buuga cinwaanka ama goobta). Sidoo kale, ma siiso xogta cinwaanka IP isticmaaleyaasha kale. Nidaamyada asturnaanta iyo sirta la isticmaalay waa heer sare. Farsamaynta farriinta waxay adeegsan kartaa Shabakadda 'Tor Network' si qarsoodi la'aan ah ugu badnaan.
Baahinta baahinta iyo Blockchain
Fariinteeda baahinta ah waxay ka madax banaan tahay dowladaha, shirkadaha iyo horumariyeyaasha, sidaa darteed, cidina ma xakamayn karto, xannibi karto, joojin karto, xakamayn karto ama faafreebi karto xisaabaadka. Dhammaan farriimaha waxaa lagu xirayaa Diffie-Hellman Curve25519, Salsa20, Poly1305 algorithms waxaana saxiixay SHA-256 + Ed25519 EdDSA. Furayaasha gaarka loo leeyahay waligood kama tagayaan qalabka la isticmaalay. Iyo isku xigxiga farriimaha iyo xaqiiqadooda waxaa damaanad qaadaya barxadda xannibaadda la hirgeliyey.
Waxay u fidisaa dadka isticmaala jeebka loo adeegsado ee loo yaqaan 'Crypto wallet', si loo fududeeyo helitaanka adduunka ee cryptocurrencies si dhakhso leh. Waxay taageertaa lacagaha soo socda: Bitcoin, Ethereum, Lisk, Dogecoin, Dash, iyo Stably Dollar. Dhammaan iyada oo loo marayo adeegsiga eraybixin loogu talagalay marin-u-helidda dhammaan-hal, taas oo siineysa isticmaaleha inuu si buuxda u xakameeyo furayaashiisa gaarka ah. Oo waxay u oggolaaneysaa una fududeeysaa in isticmaaleyaashu ay heli karaan oo ay si toos ah lacag u bixin karaan inta ay la sheekaysanayaan dadka ay la xiriiraan, ama ay adeegsadaan Bots-ka wax ka beddeli kara howlaha.
Nidaamka Isweydaarsiga Cryptocurrency
Waxay bixisaa nidaam loo qaybiyey is-weydaarsiyo qarsoodi ah, taas oo u sahlaysa dadka isticmaala inay si qarsoodi ah u iibsadaan / u iibiyaan (u ganacsadaan) hantida dijitaalka ah, horay loo kaydiyey loona wareejiyey, iyagoo adeegsanaya sheekaysiga.
Waxay isticmaashaa rukhsadda GPLv3, oo u oggolaanaysa dib-u-eegista koodhka ilaha, oo ay ku jiraan Block node, borotokoolka isgaarsiinta iyo codsiyada farriinta macaamiisha.
Si aad uga soo dejiso Linux, waad sameyn kartaa dhagsii xiriirka soo socda oo ku yaal degelkeeda rasmiga ah, si loogu soo dejiyo rakibayaasha «Qaabka AppImage», Of the nooca hadda deggan (2.7.0), iyo wixii macluumaad dheeraad ah waxaad toos u booqan kartaa kanaga bogga rasmiga ah ee GitHub. Waxay kaloo leedahay rakibayaal Windows, MacOS, Android, iOS iyo Tor, oo lagu daray macaamiil websaydh ah.
Marka Xirmada AppImage, waxaa lagu rakibi karaa iyada oo loo marayo interface interface, iyada oo siineysa rukhsad si ay uga fuliso maareeyaha faylka loo adeegsaday oo lagu fulinayo baakada halkaas oo jiirka. Markii la fuliyo, waxaan ku geli karnaa abuurista iyo gelinta a macnaha guud daaqadda hore. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qodobkan waxaad riixi kartaa waxyaabaha soo socda isku xirka.
Marka arjiga la galo, waxyaabaha soo socda ayaa la soo bandhigayaa aragtiyo iyo faahfaahin:
Sida la arki karo, "Aadam" waa mid xiiso leh barnaamijka fariimaha dagdag ah oo baahsan nooca PWA (Codsiga Shabakada Horusocodka / Codsiga Shabakada Horusocodka) taasi waa mudan tahay in la isku dayo in la ogaado in badan oo adduunka ah Defi.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Adamant», xiiso iyo wax yar oo la yaqaan barnaamijka fariimaha degdega ah ilo furan oo ku saleysan tiknoolajiyada xannibaadda (xannibaadda) taas oo iyaduna, u adeegta sidii Wallet Crypto y Nidaamka Isweydaarsiga Cryptocurrency; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Aadam: Barnaamij fariin qarsoodi ah oo aan la aqoon baahin iyo wax ka badan
Laba weyn ayaa diyaar u ah inay is wajahaan abaalmarintuna waa xogteena